Tinye akwụkwọ maka họtelu ndi di na Ikeja, Lagos - Jumia Travel
Ikeja bu ebe no puru anopu na ime obodo Lagos nime Nigeria. Enwere ihe kariri agbataobi iri na Ikeja bu nke ndi madu bi na ya kariri nde abụọ. Ebe obibi ndu di elu na ya gụnyere ebe ndị a, Opebi, Ogba, Maryland, Government Residential Area (Ogige ebe obibi nke goovmenti) ( GRA ) na ebe ndị ọzọ oha na eze bijupụtara na ya ebe ndi dị ka Agidingbi, Oregun , Ojodu , Akiode na Alausa bu ebe ulo oru isi ochichi goovementi obodo Lagos Steti di. O bu kwa na Ikeja ka ọdụ ugboelụ njem nke mba uwa Murtala Mohammed International di.
Ebe Ogige njem nleta Ndi Na Adọrọ Mmasị madu na Ikeja
Ikeja nwere otuto ogige ebe nlekota ndi di iche iche bu ebe ndị dị ka Night shift Coliseum ebe i nwere ike I no zuru ike na oge mgbede, zute ndi ahia achụmnta ego, ndị ọkachamara na ihe di iche iche; ọ na-enye ezi ohere di nma maka ikparita nkata maka azụmahịa ya na ntụrụndụ mmanu.Ọ bụrụ na ị hụrụ uda egwu Afro nke obodo Nigeria na ndi otu egwu n'anya i nwere ike I ga na ogige ebe nchuaja (uloagbara) mbụ Fela Kuti keputara na kwa Mother Land (Ala Mama) nke Lagbaja onye egwu amama nwe. Ikeja bụ ebe a na adighi ararụra na ma oli; obibi ndu nke abalị ya adịghị akwusi akwusi. Ịkwesịghị ka acho gi acho na okporo ụzọama nke Allen (Allen Avenue) amama maka ihe omume ya na-ekwo ekwo, enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke foduru nke nta ka odiri na n'okporo ámá ya ọ bụla. Ụgbọala Njem nke Ọha Na EzeIme nkpaghari na gburugburu Ikeja abụghị ihe nsogbu o bula, Ị nwere ike iji ụgbọala tagzi nke onu ego ya bu site na nari naira asaa rue na otu puku na nari naira ise nke na adabere na ebe I na-aga.
Adịghị ekwe ka ụgbọala na acha ododo banye nime ọdọ ugbo elu, n’ihi nke a ị ga acho ugboala tagzi na enweghi agba obula na ahu ya bu ndi nke na adi kari oke onu, n'ime Ikeja, enwe kwara otutu ebe ụgbọala na akwụsị (bọstopu) dị iche iche na kwa okporo ụzọ njikota nke ugboala bos di iche iche.
Họtelu ndi di na Ikeja , Ulo azụmahịa
Họtelu ndi di na Ikeja bu ndi enwere ike itinye akwụkwọ maka onuno ha ma kwụo-ụgwọ ha site igwe ozi azumahia kọmputa na Jumia Travel. Renaissance Họtelu na enye otutu oké ihe ọrụ na gburugburu ogige ebe obibi ya di jụụ. Ọ bụ naanị nkeji iri na ise site na ọdo ugbọelu ukwu nke mba uwa. Ị pụkwara ịhụ ọtụtụ họtelu ndi di ọnụ ala na Ikeja ndi dị ka Divine Fountain, Emerald Họtelu na Access Họtelu. Ọnu ego họtelu ndị a bu site na puku naira ise gawa elu. Ọtụtụ họtelu ndi di na Ikeja Nigeria nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enye nri obodo Nigeria na nri obodo mba ofesi. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka Soups na ndị ọzọ nwere onodu na Ikeja GRA bu ndi na enye nri obodo Nigeria pụrụ iche na onu ego ahịa di ala; ọ bu na di na ebe odi ala, I ga eji nari naira ise rie nri obodo Nigeria dị iche iche na-atọ ezi ụtọ. Na afọ ndi na-adịbeghị anya ugbu a, otutu ulo ahịa emepesiala na Ikeja, ya mere, ma ị na- achọ ịzụ akwa ndi emere n'ógbè gị ma ọ bụ uwe ndi emere na mba ọdịda anyanwụ, ulo ahịa dị ka ulo ebe azumahia nke Ikeja bu nke a na akpo (Ikeja Shopping Mall) na okwu beeke nwere ọkọlọtọ na sinima nke mba ofesi, nwere ulo ahia di ogo nwere ọkọlọtọ kariri iri itolu na ọtụtụ ulo oru ebe a na emezi isi a na akpo (Hair Salon) na okwu beeke, Ụlọ oba ego, na igwe mweputa ego bu nke a na akpo (ATM) na okwu beeke, ụlọ ahịa ndi nzirite ozi ekwe nti na ebe oriri na ọṅụṅụ nwere onodu gburugburu ọtụtụ họtelu na Ikeja Lagos. Ị kwesịghi ị nno na ihe ukọ nke egwuruegwu gba gburugburu Ikeja .